बिहेमा दाइजो कम भएको भन्दै ८ महिनाकि गर्भवतीको पा पीहरूले……. – Nepali in Australia
February 2, 2021 EditorLeaveaComment on बिहेमा दाइजो कम भएको भन्दै ८ महिनाकि गर्भवतीको पा पीहरूले…….
स्थानीय हरप्रीत सिंहका अनुसार उनका काका हरजीत सिंहकी छोरी मनजित कौरको २२ अक्टुबर मा सिमरनसँग विवाह भएको थियो। विवाहको समयमा, मनजीताका बुबाले आफ्नो स्थिति अनुसार केटाहरूलाई दाइजो दिए।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
आफ्नी छोरीको शव देखेपछि उनले पुलिसलाई घटनाको बारेमा जानकारी गराए। त्यसपछि पुलिस घटनास्थ लमा पुगे र मंजिताको शवको मुचुल्का उठाई उनका परिवार बिरुद्ध मु द्दा हा’ले। पुलिसले घटनाको दर्ता गराएपछि उनका त्यो घरमा सबै घर छोडेर अहिले फ’रा र रहेका छन् ।****** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ******
March 20, 2021 March 20, 2021 auther